Taariikhda My Butros » Top Tips for Kiss weyn kaaso Just Eebaha
Dhunkasho waa qayb aad u muhiim ah oo ah wax xiriir jaceyl. Tan iyo markii ay wakhtiyadii hore khubaro badan oo xiriir ah ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhunkashada iyo hadda natiijooyinka ka soo baxay cilmi-baarista ah ayaa cadeeyay in inta jeer ee dhunkashada waa si toos ah saamiyeed si heer sheegatey inay ugu qanacsan in xiriir.
Intii lagu guda jiray cilmi-baadhista ayaa sheegay in la ogaaday in 66% haweenka iyo 59% oo rag dhamaaday xidhiidhka ay kaliya sababtoo ah ay xaaskaaga ma ahaa wanaagsan ee Dhunkashada. Tani waxa ay muujinaysaa sida xun mid loo baahan yahay in aad barato farshaxanka dhunkashada in la sameeyo isaga / iyada xiriir mid ka mid ah muddo dheer. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin waxtar u dhunkasho weyn.
– Isku day inaad ka fogaato dhunkashada ee dadweynaha. Haa, waxaad xaqiiqdii tegi kartaa pecks degdeg ah si cad, laakiin waa caqliga leh mar walba si looga fogaado in aad dareen ay bannaanka ku. Dhunkashooyinkiisu dareen waa qurxin daqiiqado gaarka ah iyo sidaas darteed waxaa fiican haddii aad ku raaxeysan iyaga oo ku albaabada u xiran yihiin ama marka ay jirto cid si aad u aragto. Dhunkasho ee gaarka loo oggol yahay labadaba la-hawlgalayaasha in ay dareen xoog leh ay ka fiican, taas oo qayb ugu weyn ee dhunkasho weyn.
– Dadka ku lugta leh xiriirka jaceyl marar badan ayay ku adag tahay in la fahmo waxa ay dhab ahaan ay tahay in ay sameeyaan la ilkahooda marka dhunkashada. Haddii aadan ka bixi karin ilkaha marka dhunkashada, waxaad xaqiiqdii waa kisser xun. Muuqataa dhibaatada lagu fudud quruxsan, laakiin dhab ahaantii waa mid aad u adag tahay in ka adkaanno.
– Si aad u hubiso in aad ilkaha aanad ugu dhammaynin dhaawicidda rafiiqaaga ama shido ku filan joojin marka dhunkashada sameeyo, waa in aad sida ugu dabacsan sida ugu macquulsan marka tuujinaya bushimahaaga saaxibka ilkaha dhexdooda. Markaas, Si tartiib ah iyaga jiid (bushimaha lammaanahaaga) Hor iyo gadaal u ogolaanaya in ay simbiriirixan habsami marayo ilkaha. Ficilka ma yahay mid aad u adag, waxa adag degganyahay heegan aan jidaynayey lamaanahaaga in la fahmo in aad ka digtoon yihiin jagada ilkaha.
– Kissers Great mar walba door bidaan inay xiriir isha la lammaanahooda markii dhunkashada. Haa, waxaa jira waqtiyo ay xirto kissers indhaha si ay u dareemaan xilligan, laakiin taasi dhacdo oo keliya haddii ay dhunkasho kaamil ah. Si aad kaamil ah dhunkashada, waa in aan si aad indhahaaga xir sida ugu dhakhsaha badan bushimahaaga soo xiriirtey in lammaanaha aad ee. Indhaha; ha socodka hamiday indhahaaga ku lamaanahaaga ee; taas waa la karinayo for dhunkasho kaamil ah.
– Kisser A weyn marna ogolaanaya waayo-aragnimo ee dhunkashada in lagu caajiso u tahay isaga / iyada la Wadaagana. Sidaas, haddii aad rabto in aad kisser fiican waa in aad hesho si aad u hubiyo in ficilka Dhunkashada ha noqon caajis ee lammaanahaaga. Hal hab oo lagu dhunkashada ka xiiso badan yahay ay ku lug jirka oo idil galay falka. Salaax qaybaha ugu badnina ee jirka lammaanahaaga la isticmaalayo iyo gacmaha si tartiib ah isaga / iyada oo madaxa ha duugin, qoorta iyo wejiga. Your lamaanahaaga hubaal bilaabi doonaa riyaaqayaa xilligan ka badan.
Si aad u dhunkasho, dhunkasho weyn, waa in aad samaysid waxyaalo noqon lammaanahaaga ku. Shaqo ma aha at dhan adag; waxaa kaliya loo baahan yahay damacsanaa xaq iyo wax badan oo hamiday